Las Vegas, Macau, Monaco yekushanya ichienzaniswa neHawaii neSychelles?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Macau Breaking Nhau » Las Vegas, Macau, Monaco yekushanya ichienzaniswa neHawaii neSychelles?
Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Investments • Nhau Dzakanaka • Macau Breaking Nhau • Monaco Kupwanya Nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Iyi hurukuro inoitika panguva yedambudziko, yemakaro kana pakutsvaga nzira yekubuda nayo. MuHawaii kubhejera kwakarambidzwa uye kune dcade vezvematongerwo enyika uye vagari havadi kuve nekubhejera mu Aloha State, uye yakashandura Las Vegas kuenda kunzvimbo yaunofarira yezororo yekuHawaii.
Kubhejera kunogona kuve kwakanaka, uye zvakare mutambo wekuchinja kune chero nzvimbo yaunobvumira. Seychelles senyika yakazvimiririra, chokwadika, ine zvazvakanakira kudzora indasitiri yakadaro uye kuve nechokwadi chekuti chikamu chakanaka chemi purofiti chinogara munyika. Kune vechokwadi lobbyist kubva kubhejera kukuru vangade kuwona kubhejera kuchipihwa pachitsuwa chisina kujairika muIndian Ocean.
Aimbova gurukota rezvekushanyirwa kweSeychelles Alain St. Ange, anova chipangamazano wezvekushanya anoona mukana wenyika yake uye akanyora mushumo yake yevhiki.
“Seychelles parizvino iri kushaya mari yakawanda inogona kuwanikwa nemakasino akasimbiswa pasi rese. Aya makasino anogona kuunza huni dzevapfumi vanobhejera kumahombekombe edu nekupa nendege, zvekufambisa, pekugara munzvimbo dzepasi rese, uye varaidzo senge nzendo dzezvikepe uye kushanya kwezvitsuwa. Pamusoro pezvo, ma roller akakwirira aya vaizoshandisa mari yakawanda pakutenga nekudya panguva yekugara kwavo, vachiwedzera kuwedzera kubatsirwa mune zveupfumi. Zvakare, sekutaura kunoita 'izvo zvipingamupinyi zvinogara zvichitsigira kasino'. Kwete kuodza moyo kubhejera, asi zviverengero zvinoratidza kuti pane mukana mukuru wemari yekugara neimba, pane kusiya imba. Iine 'imba' iri Seychelles mune ino chiitiko, kumwe kubatsirwa kwehupfumi kunosimbiswa.
“Nyika dzakaita seMacau neMonaco dzinozivikanwa nemakasinasi avo emhando yepamusoro, uye zvakavakwa zvine hupfumi kubudikidza nekufambiswa kwevanobhejera vepamusoro, vanozivikanwa sevatambi vejunket. Vatambi veJunket vakatanga muUS makore mazhinji apfuura muchirongwa chekuvaka iro rave kunzi guta reLas Vegas. Vashandi veCasino muLas Vegas vaizotora 'junketeers' kuti vazadze ndege nevanokwanisa kubhejera. Vatambi ava vaizorapwa nendege dzemahara, pekugara muhotera, chikafu nemitambo yemahara mukuchinjana kuzvipira kwavo kubheja huwandu hwemaawa pazuva pazuva rakajeka saizi yekubheja. Iwo makasino akafungidzira kuti vatambi vaizorasikirwa kupfuura izvo zvakaiswa pakuvaunza kumatafura, uye yakawanda yenguva ivo vaive vechokwadi. Munguva pfupi inotevera, iyo junket player pfungwa yakanga yave bhizinesi repasirese.
“Vatambi ava varatidzira kuti vangade kuunzwa kuSeychelles kuti vabheje uye panguva imwe chete kuti vafarire zvinofadza zvekunze kwenyika yedu, mubatanidzwa wavangangowana kune imwe nzvimbo. Nehurombo, ikozvino mutemo unorambidza macasino emuno kubva kuvakoka. ”
Iko kune zvechokwadi kunzwisisika kunetsekana nezve mukana wekubiridzira mari nevatambi vejunket uye kushomeka kwekutonga kana zviitiko zvemari zvikaitika kunze kweSychelles. Muchirevo chechinyorwa ichi, zvakakosha kuti uzive kuti kana vatambi ava vakaunzwa kuSychelles izvo zviremera zvichazoda kutonga zvese zvinoitiswa nemari yemutambi, uye kuti zviitiko izvi zvinoitika chete mukasino iri muSeychelles. Mitemo pamusoro pejunkets uye kwavo kudzora zvakare kunofanirwa kuiswa munzvimbo zvisati zvaitika.
Iyo indasitiri yeSychelles yekushanya parizvino irikushaya mukana wakakura mukuunza vatambi vepamusoro vatenderera munyika yedu. Isu tatova nenzvimbo yezvivakwa zvakanakisa nemahotera uye nzvimbo dzekuzororera uko chero weava vatambi aigona kunzwa pamba.
Kushamisika Kwendege dzeF-117 Nighthawk Stealth ...
Kudzorera Brand USA Mutemo Wakatenderwa neUS Senate
Ongorora Kunakidzwa kweFrankfurt Airport
12 vafambi vezvitima vakaurawa, vashanu vakakuvara mune mafashama ...
Ndege yePhilippines yakafa nhamba yekufa inokwira kusvika makumi mashanu nemaviri
Dzazvino US, UK, EU mazano kune Humambo hweEswatini ...
IMEX Boka rinoratidza zvakavanzika
Jamaica Tourism Inotumira Nyaradzo kuMhuri yeSue ...
Matenga eGuam anozovhenekera ne fireworks & drone ...
IATA: Rolls-Royce inosimbisa kuzvipira kuvhura ...